‘आलम रिहा भयो भने मलाई मार्छ’
सागर चन्द चन्द्रनिगाहपुर, १ कात्तिक
३० असोजको साँझ ७ बजिसकेको छ । हामी उनको घरमा पुग्दा श्रीनारायण सिंह आँगनमै खाना पकाउँदै थिए । मोटरसाइकलको आवाज र बत्ती देखेपछि श्रीनारायणलाई लाग्यो सुरक्षा दिन प्रहरी आइपुगे ।
गत २६ असोजमा सांसद महम्मद अफ्ताव आलम पक्राउ परेपछि प्रहरीले हरेक रात श्रीनारायणको घरमा सुरक्षा दिन थालेको छ । दिउँसो पनि श्रीनारायाण एक्लै घरमा बस्दैनन् । उनी सकेसम्म प्रहरी भएको आसपास जान्छन् ।
श्रीनारायणका छोरा त्रिलोकप्रताप सिहं (पिन्टु) २७ चैत २०६४ को विस्फोटमा घाइते भएका थिए । आफन्तका अनुसार उनलाई बेहोस बनाएर आलमले इँटाभट्टामा हालेर मारे ।
हिन्दु परम्पराअनुसार मृतकको शरिर नभेटिएपछि कुशको सांकेतिक लाश बनाएर सद्गत गर्नुपर्छ । तर, श्रीनारायणले अहिलेसम्म केही गरेकै छैनन् ।
‘अझै विश्वास लाग्दैन छोरा मरेको कुरा,’ उनी सुनाउँछन् ।
२०६४ मा २३ वर्षका थिए त्रिलोकप्रताप । भाषण कलामा ‘उस्ताज’ थिए । त्यसैले त्रिलोकप्रतापलाई चुनाव सुरू अगाडिदेखि नै आलमले प्रचार प्रसारमा लग्न खोजिरहेका थिए ।
‘पहिले त मैले पठाइनँ, त्यो दिन (२७ चैत) म खेतमा गएको थिएँ, छोरालाई लिएर गएछन्,’ श्रीनारायण १२ अगाडिको दिन सम्झिन्छन् ।
त्यसपछि कहिल्यै फर्केनन् त्रिलोकप्रताप । छोराको सम्झनामा १२ वर्ष बितिगए । छोरा भेटिनुको साटो डर र त्रास पो बढ्यो । श्रीनारायणका दुई छोरा थिए । जेठा छोरा सत्येन्द्र अहिले हरदम बुबासँगै रहन्छन् । रौतहटको स्थानीय पत्रिकामा काम गरिरहेका सत्येन्द्र पनि डरले घटनाको बारेमा केही बोल्दैनन् ।
बम विस्फोट भएको २७ गते नै थाह पाएका थिए श्रीनारायणले । विस्फोटको आवाज सुनेपछि उनको मन झस्केको त हो । तर, छोरा नै विस्फोटमा परेको होला भन्ने उनले कल्पना पनि गरेनन् ।
२७ चैत साँझ छोरा घर नआएपछि उनी डराए । पछिल्लो दिन २८ चैत उनी बिहानै राजपुर गए ।
‘तर, गाउँमा छिर्नै दिएनन्, त्यसपछि शंका लाग्यो,’ ७९ वर्षीय श्रीनारायण भन्छन् ।
पछि थाहा पाए श्रीनारायणले आफ्नो छोरा पनि विस्फोटनमा परेको कुरा । उनी एकछिन रनभूल्लमा परे । के गर्ने कसो गर्ने ? केही मेसो पाएनन् । चैतको घामा रन्थिनिदै घर आए । घर पुग्दा त्रिलोककी आमा कमलादेवी सिहं बेहोस थिइन् ।
छोराको शोकमा उनीहरूले ६ दिनसम्म त खाना पनि खान सकेनन् । श्रीनारायण परिवारले विस्तारै जिन्दगी लयमा फर्काउन खोज्यो । तर सकेन ।
‘अभि भी कौनो आदमी दरवाजा पे आके ढक ढक कएलापर हमर पिन्टु आगेल लागले (कसैले ढोका ढक ढक गर्‍याे भने पिन्टु नै हो कि जस्तो लाग्छ),’ आमा कमलादेवि भन्छिन् ।
हरेक रात उनी छोरा आउँछ कि भन्ने आशमा बस्छिन् । तर, आउँदैन छोरा ।
खाना पस्किदा पनि कमलादेवी पिन्टुको भाग छुट्याउँछिन् । तर, आउँदैन खाना खान । पीडा र वेदनाका यी १२ वर्ष कसरी बिते ? उनी शब्दमा बयान गर्न सक्दिनन् । कसैले केही सोध्यो कि उनका आँखाबाट आँशु झर्न थाल्छ । श्रीनारायणको पनि हालत उस्तै छ ।
बिहारबाट प्ल्स टु पास गरेका त्रिलोप्रताप गौरमा बीएड गर्दै थिए । श्रीनारायणसँग अहिले छोराको सम्झना, उसको नागरिकता, कलेजका सर्टिफिकेट र एक थान फोटो मात्रै छ ।
आफ्नो घरमा आउने हर एक नयाँ मान्छेलाई उनी छोराको तस्वीर देखाउँछन् । छोराको तस्वीर देखाइरहँदा उनी आफूलाई थाम्न सक्दैनन् । उनका आँखाबाट अनयासै आँशु झर्छ.............।
‘छोरा जिउँदै थियो, उसको जाँघमा थोरै चोट लागेको थियो रे, घर आउन खोज्दा उसलाई आउन दिएनछन्, उपचार गर्ने भन्दै स्लाइनमा बेहोस हुने औषधि हालेर बेहोस बनाएछन्,’ श्रीनारायण भन्छन् ।
बेहोस बनाइसकेपछि त्रिलोकप्रताप, ओसीसहित अन्यलाई बोरामा हालेर इँटाभट्टाको आगोमा खसाले । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा एक प्रत्यक्षदर्शीले दिएको बयानअनुसार ‘इँटाभट्टाको दाउरा हाल्ने ठाउँमा ठूलो ज्यान भएका मान्छे नछिरेपछि बन्चरोले काटेर हालियो ।’
त्रिलोक पनि ठूलो ज्यानका थिए । उनलाई पनि बञ्चरोले काटेर इँटाभट्टामा हालियो ।
श्रीनारायण, रोक्स्ना खातुनले प्रहरीमा जाहेरी दिन खोजे । जाहेरी लिइएन । रौतहटका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा भण्डारी, प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण नेउपाने र सशश्त्र प्रहरीका एसपी रामकृष्ण लामाले घटना नै नभएको भन्दै जाहेरी दिन जानेहरूलाई थर्काए ।
१२ वर्षदेखि न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका श्रीनारायणले बम प्रकरणको समाचार प्रकाशित भएका पत्रिका संकलन गरेर राखेका छन् ।
उनी तिनै पत्रिकालाई प्रमाणको रुपमा पेश गर्छन् ।
‘सबै प्रमाण त उबेलै मेटिसके, अब त के होला र ? यही समाचार मात्रै हो प्रमाण,’ श्रीनारायण भन्छन् ।
अहिले आलम पक्राउपरेपछि उनी झन डराएकाछन् । श्रीनारायण भन्छन् – प्रत्येक चुनावमा २/४ जना त त्यसले मारेकै हुन्थ्यो ।’
उनलाई डर अदालतले कतै आलमलाई धरौटीमा रिहा गर्छ कि भन्ने छ ।
‘अदालतले धरौटीमा रिहा गर्यो भने त मेरो ज्यानमा खतरा हुन्छ,’ रोक्सना खातुन जस्तै आफू पनि मारिने डर छ श्रीनारायणमा ।
उनी भन्छन् – हजुर लेख्दिनु होला, आलमलाई धरौटीमा छाड्यो भने मेरो ज्यानमा खतरा छ ।’
२०६४ यता रौतहटमा १४ जना प्रहरी प्रमुख परिवर्तन भए । तर, कसैले यो घटनामा अनुसन्धान गर्न चाहेनन् । लक्ष्मण नेउपानेपछि रौतहट प्रहरी प्रमुख भएर आएका जयबहादुर चन्दले घटनालाई कपोलकल्पित भने ।
त्यसपछि २०६८ सालमा रौतहट प्रहरी प्रमुख बनेर आएका महेशविक्रम शाहले यो घटना अनुसन्धान गर्न खोजेका थिए । अनुसन्धान गर्न खोजेपछि उनलाई रौतहटबाट सरुवा गरियो ।
‘मैले के पाउँछु, छोरा पाउने होइन, उ (आलम) २० वर्ष जेल बसेर निस्कन्छ । अरु त के हुन्छ र ?’ त्रिलोकप्रतावका कमलादेवी सिंह भन्छिन् ।
कमलालाई डर छ, २० वर्षपछि आलम जेलबाट निस्केर पनि आफ्नो परिवारका मान्छेलाई मार्छ कि भनेर ।
‘२० वर्षपछि मेरो छोरा, नाति त हुन्छ, यिनलाई पनि मार्छ त्यसले, त्यसैले जन्मकैद होस्,’ आमा कमलादेवीले भनिन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी नै त्रासमा, आलमद्धारा बयान दिन आनाकानी
छिर्नै नसकिने सांसद आलमको गाउँ
सिनेमाको कथाजस्तो लाग्ने सांसद आलमसँग जोडिएको त्यो ‘नरसंहार’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १, २०७६, ११:५४:००